महिला लघुवित्तको आइपीओ शुक्रबारबाट खुला : कम्पनी कस्तो छ, कति कित्ता भर्दा ठीक ? - Lekhapadhi मुख्य समाचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
महिला लघुवित्तको आइपीओ शुक्रबारबाट खुला : कम्पनी कस्तो छ, कति कित्ता भर्दा ठीक ?
लेखक : लेखापढी २९ माघ २०७७, बिहीबार २०:५६ मा प्रकाशित
काठमाडौं- महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले शुक्रबार (माघ ३० गते) देखि ४ लाख कित्ता आइपीओ बिक्री खुला गर्दैछ । यसमध्ये ०.५% (५ हजार कित्ता) कम्पनीका कर्मचारीलाई सुरक्षित गरिएको छ भने ५% (२० हजार कित्ता) सेयर म्युचुअल फन्डलाई बाँडफाँट गरिएको छ । बाँकी ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
महिला लघुवित्तको आइपीओ फागुन २ गतेसम्म भर्न सकिनेछ । उक्त समयमा सबै सेयर बिक्री नभएमा भने फागुन १२ गतेसम्म खुला रहनेछ । लगानीकर्ताले सी–आस्वाको माध्यमबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यो आइपीओमा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङले बिक्री प्रबन्धकको काम गर्दैछ ।
क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले महिलाको लघुवित्तलाई “इक्राएनपी बीबी” रेटिङ प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनी समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्न मध्यम जोखिममा रहेको आधार जनाउँछ । इक्रा नेपालले सन् २०२० अक्टोबर २१ मा यो रेटिङ दिएको हो । यो रेटिङ सन् २०२१ अक्टोबर २० सम्म बाहल रहनेछ ।
यसमा झण्डै १४ लाख जनाले सेयर भरेका छन् । त्यसभन्दा अघि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपीओमा पनि कुल १४ लाख ८१ हजार २८४ जनाले आवेदन दिएका थिए । पछिल्ला आइपीओमा परेको आवेदनलाई आधार मान्ने हो भने महिला लघुवित्तको सेयर पाउन पनि लगानीकर्ताले भाग्यमै भर पर्नुपर्नेछ । अझ महिला लघुवित्तले सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको सेयर संख्या ग्रीनलाइफ र इन्फ्रास्ट्ररको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ ।
जसका कारण सेयर पाउन निकै भाग्यमानी हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि पनि लघुवित्तको सेयरमा अझै बढी आकर्षण हुने गर्छ । न्यूनतम १० कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्ने हो भने पनि जम्मा ३७ हजार ५०० जना लगानीकर्ताले मात्र यो आइपीओ हात पार्ने देखिन्छ । तसर्थ, महिलाको आइपीओमा पनि १० कित्ताका लागि आवेदन दिए पर्याप्त हुनेछ । यद्दपि, यस कम्पनीले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।